Jubaland oo amartay in shirarka la qabanayo ruqsad dawlada looga soo qaato. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Jubaland oo amartay in shirarka la qabanayo ruqsad dawlada looga soo qaato.
Jubaland oo amartay in shirarka la qabanayo ruqsad dawlada looga soo qaato.
September 19, 2019 - By: Mohamud Nadif
Shirka Golaha Wasiirada Jubaland oo maanta qabsoomay ayaa maanta looga hadlay arimo la xiriira Amaanka iyo xaalada bini’aadanimo ee ka jirta deegaanada Jubaland. Wasaarada Arimaha Gudaha Jubaland waxaa la faray inay warbixino dhamaystiran ka keenan xaalado bini’aadanimo ka jira deegaanada qaar si looga hawlaglo loona sameeyo gurmad deg deg ah.
Sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay arimaha nabad gelyada Jubaland waxaana laysku raacay in dhamaan shirar iyo kulamo ruqsad la’aan ah aan lagu qaban karin Magaaalada Kismaayo laga bilaabo 20 bishan Sept, iyadooona la faray ciidanka ammaanka inay muujiyaan feejignaan buuxda.
waxaa sidoo kale kulanka lagaga hadlay howlaha ay hormuudka ka tahay Wasaarada Arimaha Gudaha Jubbaland ee la xiriira dhamaynta tabashooyinkii ka dhashay Doorashadii Madaxweynaha ee 22 Ogoosto ka dhacday Jubbaland iyadoo la bogaadiyay sida howlahaas ay Wasaaradu ilaa hada u wado.